प्रचण्ड र देउबाको पेलानले एमालेमा रुवाबासी, ओलीले भने पेल्नु पेले, अब हेर्नुपर्छ — Imandarmedia.com
काठमाडौ। विनियोजन विधेयक पारित र त्यससँग आश्रित आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीसहित प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक सुरू भयो । बैठकको कारबाही सुरू हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरू रोष्ट्रमतिर कुदे भने उनीहरूलाई छेक्न मर्यादापालकले हाते साङ्लो बनाए ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा ‘वेल’ घेराउका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली । तस्बिर : अंगद
विगतका वर्षहरूमा प्रत्येक मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको बजेट, योजनामाथि सांसदहरूले झन्डै महिनादिन छलफल गर्थे । र, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिन्थे । यसपटक भने २२ मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेट र छनोट भएका योजनामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारी मन्त्री शर्माकै थियो ।
त्यसो त संसद्‌मा आर्थिक विधेयकमा छलफलका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने र छलफलमा सहभागी हुने सांसद एकजना मात्रै थिए, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल ।
संसद् प्रतिपक्षको भनिन्छ । त्यसैले गर्दा कता कति बजेट कटौती भयो र विकासका कुन योजनामा किन बजेट कम भयो भन्दै आफ्ना धारणा राख्ने अवसर हुन्छ । सत्तारुढ दलका कम प्रभावशाली नेता सांसदका लागि पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासबारे कुरा राख्ने सार्वभौम थलो संसद् हो । तर, यसपटक प्रतिपक्ष वेलमा थियो भने सत्तापक्षका सांसदहरूलाई बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव नराख्न र छलफलमा भाग नलिई पारित गर्नका लागि टेबुल बजाउन मात्रै भनिएको थियो । प्रतिपक्ष वेलमा भएको बेला सत्तापक्षका बोल्न चाहने सांसदहरूलाई पनि ‘चुप लाग्न’ भनिएको थियो ।
सांसद सुवालले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न १२ मिनेटको समय पाए । उनी मध्यतिर पुगेपछि मन्त्री शर्माको कानमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही भने । त्यसलगत्तै मन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभा हलको पछाडिबाट बाहिरिए । उनी करिब ८ मिनेटजति बाहिरै बसे ।
सुवाल बोलिसकेपछि सभामुखले जवाफ दिन बोलाएपछि शर्मा रोष्ट्रम छेउको ढोकाबाट भित्र प्रवेश गरेर रोष्ट्रममा पुगे । त्यसपछि पनि पटक–पटक छलफलमा सांसद सुवाल सहभागी भए र त्यसको जवाफ दिनको लागि मन्त्री शर्मा नै थिए । सुवाल बोल्ने बेलासम्म मन्त्री शर्मा रोष्ट्रमको छेउमा बस्थे र आफूलाई बोलाएपछि सकेसम्म छोटो समयमा जवाफ दिएर फेरि छेलिन्थे ।
कानुनमन्त्री कार्कीले संसद्‌मा अवरोध हटाउनका लागि पछिल्लो समय मात्रै ओली निवास बालकोटमा दुई पटक गएको जानकारी दिए । ‘संसदलाई सुचारु गर्नका निम्ति मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गरिराखेको छु ।
आज संसद् सुचारु रुपले चल्ला भन्ने आशा लिएको थिएँ र म अहिलेपनि आशावादी छु,’ उनले भने, ‘संसद् सुचारु रुपले चल्नुपर्दछ । संसद्लाई प्रभावकारी रुपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुइटैको हो । एमालेजस्तो अनुभवी प्रतिपक्षीबाट त्यो भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौं ।’ ओलीको पालामा संसद्‌मा आएका महत्त्वपूर्ण विधेयक रोक्नका लागि एमाले नै लागेकोमा भने उनले आश्चर्य व्यक्त गरे ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यशैली र एमालेप्रतिको भेदभावका कारण आन्दोलित हुनुपरेको बताए । ‘संसद्‌मा प्रस्तुत भएका कार्यसूची भन्दा पनि हामी सभामुखको कार्यशैली र एमालेप्रति गरेको विभेदको कारणले संसद्‍मा आन्दोलनमा छौं,’ उनले भने, ‘जबसम्म न्याय गर्नुहुन्न तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ ।
’ प्रतिपक्षले अवरोध गरिरहेको अवस्थामा पनि विभिन्न विधेयक अगाडि बढाएकोमा उनले आपत्ति जनाए । एक सांसदले पनि उभिएर विरोध जनाए संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने संसदीय अभ्यासको खिलाफमा सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्ष वेलमा पुगेको बेला निरन्तर कारबाही अगाडि बढाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
यसरी प्रतिपक्षको अवरोधकाबीच विनियोजन विधेयक पारित भएपछि प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तपाईंहरूलाई पेलेरै बजेट पास भयो नि ? भनेर प्रतिक्रिया लिन खोजे । सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा ओलीले जवाफ दिए– ‘पेल्नु पेले ! पेल्नु पेले, अब हेर्नुपर्छ ।